HomeWararka CiyaarahaArsenal 2-0 Leeds United, Gunners iyo Blues oo iska Xaadiriyay Semi-finalka Carabao Cup
October 27, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska 0
Kooxaha Chelsea iyo Arsenal ayaa usoo gudbay semi-finalka tartanka Carabao Cup iyagoo guulo ka gaadhay Southampton iyo Leeds United.
Chelsea ayaa rikoodheyaal kusoo baxday kaddib ciyaar ku dhamaatay 1-1 oo ay isla rafteen Southampton halka Arsenal ay awood kusoo dhaaftay Leeds United oo marti ugu ahayd Emirates Stadium.
Kai Havertz ayaa hoggaanka u dhiibay Chelsea dhamaadka qaybta hore iyadoo uu tababare Thomas Tuchel isbeddel badan ku sameeyey safkiisii caadiga ahaa oo uu kusoo bilaabay ciyaartoyda kaydka oo uu hal laacib oo kaliya soo dhex raaciyey.
Southampton oo bandhiggeedu fiicnaa ayaa qaybtii dambe la timid goolka barbarraha waxaana u dhaliyey Che Adams laba daqiiqadood oo kaliya amarkii ay socotay qaybta labaad.
Fursado badan ayay iska khasaariyeen labada kooxood, waxaana dhamaadkii naxdin lagu dilay Thomas Tuchel oo halis la geliyey goolkiisa.
Rikoodheyaal ayaa loo dhigay labada kooxood, waxaana 4-3 ku badisay Chelsea oo laadka ugu dambeeya ee guusha u go’aamiyey uu u dhaliyey Reece James.
Arsenal ayaa iyaduna durduro kusoo dhaaftay Leeds United oo ahayd koox kala daadsan, xilli ciyaareedkana ku bilaabatay si liidatay.
Chambers ayaa hoggaanka u dhiibay Arsenal daqiiqaddii 35aad isaga oo madax awood badan ku qabtay kubbad uu madax ugu soo dhiibay Nicolas Pepe, taas oo ka gudubtay xarriiqda ka hor intii aanu goolhaye Illan Meslier dib usoo celin, waxaana dooddii ciyaartoyda Leeds waxba kama jiraan ka dhigtay saacadda oo qaylisay, islamarkaana xaqiijisay in kubaddu ka gudubtay xariiqda.
Da’yarka kale ee Nketiah ayaa Arsenal ka saaray cabsida qaybtii labaad isaga oo dhexda ka qaatay kubbad ay difaaca Leeds United u dhiibeen goolhaye Meslier laakiin meel dhexe ku qabowday.
Arsenal ayaa u qalmaysay inay dhaliso goolal intan ka badan laakiin ciyaartoydooda da’yarta ah ayaa lumiyey fursadihii kale ee ay heleen.
Sunderland ayaa iyaduna usoo gudubtay wareegga siddeedda iyadoo rikoodheyaal kaga badisay QPR oo ciyaartooda caadiga ah ay ku dhamaatay barbarro goolal la’aan ah.